परदेशमा नेपाल : page3nepal.com
Angels on the floor, Fashion show, USA was successfully conducted
July 20, 2018 Filed under परदेशमा नेपाल
Angels on the floor, Fashion show, USA was successfully conducted on 7th of July 2018. The chief guests of the show were honorable H.E. Dr. Arjun Kumar Karki who is the ambassador
अमेरिकाको भर्जिनियामा सत्य स्वरुप लाइभ सम्पन्न
June 10, 2018 Filed under परदेशमा नेपाल
पेज३नेपाल सम्बाददाता, अमेरिका । आर एण्ड आर समुहले संयुक्त आयोजना गरेको भक्तराज आचार्य सहयोग साँझ भर्जिनियामा सम्पन्न भएको छ । जुलाई-२ मा आयोजना गरिएको को सहयोगार्थ साँझमा स्रष्टा भक्तराज आचार्यका दुई सुपु्त्र
अमेरिकामा फेशन शो को आयोजना गरिदै
June 8, 2018 Filed under परदेशमा नेपाल
आगामी जुलाइ-७ का दिन अमेरिका को वाटरफर्ड , भर्जिनियामा आयोजना गर्न लागिएको फेशन शो कार्यक्रमका लागी सहभागीहरुको फोटोशेसनको कार्यहरु हाल चलिरहेको छ । चर्चित फोटोग्राफर बिक्रान्तमान श्रेष्ठद्वारा उक्त फेशन शोमा सहभागीता जनाउने
लाइभ च्यारिटी कन्सर्ट का लागी सत्य स्वरुप पुगे अमेरिका
June 1, 2018 Filed under परदेशमा नेपाल
सन्तोष भट्टराई, पेज३नेपाल । अमेरिकामा आयोजना गरिन लागिएको “लाइभ च्यारिटी कन्सर्ट” का लागी नेपाल बाट गायकद्वय सत्यराज र स्वरुपराज आचार्य अमेरिका आइपुगेका छन् । कार्यक्रमममा हायक द्वयले आफ्ना गीतहरुको अलावा भजन शिरोमणी
पेज३नेपाल सम्बाददाता, अमेरिका । आर एण्ड आर समुहले संयुक्त आयोजना
आगामी जुलाइ-७ का दिन अमेरिका को वाटरफर्ड , भर्जिनियामा आयोजना